Bayern Munich oo 4-0 Ku Hurguftey Barcelona Maxyse Galabsatey
Champions League -Aprill-23-2013-xiddigaha.ca-Ottawa-Akhyaartay qormadeena ciyaaraha waxaynu maanta ku miyirsaneynaa afartii naadi ee iskugu soo hadhay Semi Finalka,oo kala ah Barcelona vs Bayern Munich iyo Real Madrid vs Durmond.
Haddaba lugtii ugu horeysey oo foodda isla galeen Barcelona iyo Bayern Munich yey dhirbaaxadu ku dhacdey?
Saaxiibayaal Semi Finalkan oo aynu muddo sugeyney isku naf baxay Bayern iyo Barcelona ciyaartan oo la wada sugayey waxaa ka soo qeybgaley dadweyne aad u tiro badan iyo dabacan taageerayaashooda waraabowqaba.
Ciyaartan oo aad u xiisa badneyd ayaa markiiba waxaa jaanta isla heley Bayern halka aad ay Barcelona ka muuqdey culeys iyo caajis badan,
hadal iyo dhamaantii daqiiqaddii9 25-aad waxaa goolkii ugu horeeyey ee farxadda Bayern u saxeexay Muller, qeybtii hore ee ciyaarta waxaa kala nastey 1-0.
Qeybtii dambe ee ciyaarta daawadayaashii ciyaarta ka soo qeybgala iyo malaayiinkii ka daawanaey Talafishanka waxay islaa hayeen Barcelona waxay la soo bixi doontaa ciyaartii lagu yaqaaney,laakiin sadaashaasu u mey dhin sidii la filayey oo waxaa la waayey Barcelona meeley jaan iyo cidhib dhigtey.
Daqiiqaddii 49-aad goolkii labaad waxaa ku fara yareystey Mario Gomez kii 3-na waxaa daqiiqaddii72-aad u raaciyey Arjen Robben,kii qalbijabkana waxaa daqiiqaddii 82-aad ku sagootiyey Muller.
Haddaba dadweynaha ciyaaraha xiiseeya ee dawanayey ciyaarta waxay is weydiinayaan maxaa ku habsadey Barcelona,ee asxaabtaay bal aynu eegno laugta labaad iyo meesha ay iskala baxaan.